Muuri News Network » Waa Maxay istaraatiijiyada Ciidan ee keeni karta in la Meereysto Tuulooyinka xeebta ah ee….
Waa Maxay istaraatiijiyada Ciidan ee keeni karta in la Meereysto Tuulooyinka xeebta ah ee….
Qormadaan waxaan uga faallooneynaa Arimaha gobolka Shabeelaha hoose, gaar ahaan Arimo la sheegayo maalmahaan in uu cabdullaahi waafow ka wado tuulooyin hoos taga degmada Marka.
Sida aad la wada socotaan deegaanada beesha Biimaal, qeybo muhiim ah waxaa weli xoog ku jooga cadawga beesha ee gobollada dhexe kasoo duullaan tegay.
Sida aan qormooyinkeennii hore idin kugu soo sheegnay in magaalada Marka laga xoreeyo cadawga, waxaa hor taagan cabdullaahi waafow oo isaga heshiis la ah cadawga beesha Biimaal , waxaa laga yaabaa dad badan qoraalladii hore aan usoo gudbinnay in aysan rumeysan laakiin waxaa ay is weydiinayeen sababaha magaalada Marko cadawga looga saari la’yahay.
Haddaba qofwalba oo wax garad ah oo beesha Biimaal u dhashay waxaa uu la yaabanaa sababaha uu Cabdullaahi Waafow u Iclaamiyay dagaalka xarakada Al-shabaab, iyadoo cadawgii dadkeenna dhibaateynaayay uu Marko joogo, welibana uu ka itaal daran yahay Al-shabaabka uu dagaalka ku iclaaminayo.
Iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa dhacday in uu lambar konton kasoo baxo isagoo Ciidamada Amisom soo raacay uuna beesha biimaal ku mashquuliyay furin cusub oo cidwalba oo ciidan wax ka taqaanna markii ay maqashay meelaha uu u duullaan tegay ay la yaabtay.
Waa maxay istaraatiijiyada Ciidan ee keeni karta in Tuulooyinka xeebta ah ee Magaalada Marka dhanka koonfur kaga beegan la weeraro, iyadoo degmada Marko dhalinyaradii Biimaal ay cadawga ku dilayaan dadkii shacabka ahaana ay ku argagixinayaan, wax fal celin ahna aan laga muujineynin .
Dad badan waxaa laga yaabaa in ay u fahmeen khibrad yari xaga Ciidanka ka heysata Cabdullaahi Waafow , dabcan khibrad ciidan malahan cabdullahi waafow laakiin beesha Biimaal saraakiishii cadawga lasoo dagaashay ee soo naafeysay ayaaba jooga, haddiiba talada ay wax ku leeyihiin, xaqiiqda dhabta ah aan idiin soo gudbinno maadaama beesha biimaal ay ku jaha wareereen dhaqdhaqaaqa Cabdullaahi Waafow.
Cabdullaahi Waafow lambar konton wuxuu kula shiray ciidanka Amisom, inta uusan soo bixin wuxuuna ka codsaday in lala heshiisiiyo madaxda waxa loogu yeero ciidanka dowladda ee jooga Shalambood , isaga oo ujeedkiisu yahay cabsida Shabaab uu ka qabo in ay iska kaashan karaan Ciidan beeleedka jooga Shalambood, sidii ayuuna gawaarida Amisom ugu soo raacay lambar konton isagoo ciidan tira ahaan aan badneyn ay la socdaan.
Markii Shalambood uu yimid madaxdii Ciidanka Shalambood ayaa Amisom ka diiday in ay Cabdullaahi waafow la heshiiyaan sidaas ayuuna Ceeljaalle ugu gudbay, beesha Biimaal wax loo sheego maadaama leyska doonayo ayaa ujeedka looga dhigay in Ceelcadow, Muungi iyo lexmooro Shabaab laga saarayo taasna looga soo safray lambarkonton.
kulamo shalay la doonayey in ay dhexmaraan cabdullaahi waafow iyo Madaxda ciidan beeleedka xooga ku jooga Shalambood ayaa baaqday iyadoo warar hoose ay shabakadda Muurinews heleyso ay sheegayaan in dhanka kale ay shuruud adag ku xirayaan Cabdullaahi waafow iyagoo codsanaya in cabdullaahi waafow uu kala diro ciidanka deegaanka.
Qorshaha uu ku tala galsanaa Waafoow ayaa ahaa in la mideeyo Ciidamada Deegaanka iyo Mooryaanta ku sugan Shalambood, oo dhamaantood ah Habargidirtii gubtay Caruurtii iyo ayeeyadooda ee Beesha Biimaal, ka dibna laga dhigo Ciidanka daraawiishta ee Koonfur Galbeed, balse taasi waxaaba ka hor yimid Xasan Jaamici iyo Kooxdiisa.
Ugu dambeyntii waxaa qofwalba oo u dhashay beesha Biimaal kula talineynaa Caqli intuu ilaahay siiyay in uu ku fakaro xilna iska saaro sidii dadka uu ka dhashay jahawareerka heysta uu uga saari lahaa, si loo helo hogaan u qalma guud ahaan Beesha Biimaal.